अधिनायकवादतिर ! - Himalkhabar.com
रिपोर्टशनिबार, आषाढ ९, २०६९
१४ जेठ र माओवादी अभीष्ट
संविधानसभा भंग हुनु तत्कालिक घटनाक्रममा अपरिहार्य जस्तो देखिए पनि यसको पछाडि ठूलो चलखेल भएको छ । संविधानसभाको आयु दुई घण्टा छँदै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो संघर्षपछि प्राप्त यो उपलब्धि जोगाउने विकल्पबारे सोच्दैनसोची अर्को निर्वाचन गर्ने निर्णय लियो । त्यसअघिसम्म क्याबिनेट बाहिर दलका शीर्ष नेताहरूबीच संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभाका उपलब्धि कसरी जोगाउने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको थियो । त्यसक्रममा कांग्रेस–एमालेले संविधानसभा नरहेको अवस्थामा पनि व्यवस्थापिका–संसद् जोगाउने, संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्ने लगायतका विकल्प अगाडि सारेका थिए ।
अर्को अधिनायकवाद !
मधेशी मोर्चालाई मतियार बनाएर माओवादी एकदलीय ‘अधिनायकवाद’ तिर अघि बढ्दा आत्तिएका कांग्रेस, एमाले लगायतका विपक्षी मुलुकका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई ‘अघि बढ्न’ उक्साइरहेका छन् । तर दलहरूको यस्तो उक्साहट लोकतन्त्रको निम्ति घातक हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बरु ‘उपयुक्त कदम चाल्न’ चौतर्फी दबाब खेपिरहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव आफैं संयमित, सन्तुलित र तटस्थ भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ‘मेमो’ पठाएर प्रधानमन्त्रीको कामचलाउ हैसियत प्रष्ट्याएका राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नाघ्ने कुनै संकेत पनि दिएका छैनन् ।
अगाडि बढ्ने बाटो
परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनतिर नलाग्ने हो भने देशको आगामी मार्गचित्र कल्पना बाहिर पुग्नेछ । त्यसका लागि सबै कुराको चाँजोपाँजो मिलाउने राष्ट्रिय सरकार आवश्यक पर्छ, जसको निक्र्योल राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै हुनसक्छ । त्यस्तो लोकतान्त्रिक सरकारले नै निर्वाचन कहिले, कति सीटमा गर्ने, कस्तो प्रणाली अपनाउने जस्ता सवालहरूको एकमुष्ट हल खोज्न सक्छ । निर्वाचन बाहेक तत्कालका अन्य विकल्प खुट्याउने काम पनि त्यही सरकारबाट हुनसक्छ ।